Madxafka Cusub ee Casriga ah (Moco) ayaa laga furay Barcelona
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Spain » Madxafka Cusub ee Casriga ah (Moco) ayaa laga furay Barcelona
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Education • Entertainment • Wararka Nederland • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Spain • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Matxafka Moco wuxuu la wareegayaa booskii Palacio Cervelló, oo hore u ahaa degenaanshaha gaarka ah ee qoyska sharafta leh ee Cervelló ilaa Qarnigii 18aad.
Madxafka Casriga ah (Moco) wuxuu ku celinayaa qaabkii matxafka loo dhan yahay ee Barcelona, ​​Spain.
Ka dib guushii ay ka gaartay Amsterdam, Moco waxay ku celcelinaysaa sida ay uga go'an tahay inay soo bandhigto shaqooyin astaan ​​u ah fannaaniinta caalamiga ah ee caanka ah iyo xiddigaha soo kacaya.
Matxafka Moco wuxuu albaabada u furi doonaa 16ka Oktoobar 2021 16th Qarnigii qarnigii badhtamaha magaalada.
The Madxafka Casriga ah (Moco) waxay ku soo celineysaa qaabkeedii madxafka loo dhan yahay ee Barcelona, ​​Spain. 16ka Oktoobar 2021, Matxafka Moco Barcelona wuxuu albaabada u furaa dadweynaha, isagoo calaamad u ah cutub cusub oo loogu talagalay madxafka madaxbannaan.
Farshaxanka Casriga & Casriga ah
Ka dib guusheedii Amsterdam, Moco waxay ku celcelinaysaa sida ay uga go'an tahay inay soo bandhigto shaqooyin astaan ​​u ah fannaaniinta caalamiga ah ee caanka ah iyo xiddigaha soo kacaya. Moco Amsterdam markii ugu horreysay albaabadeeda furtay Abriil 2016. Maanta, Matxafka Moco Amsterdam wuxuu soo dhoweeyay ku dhawaad ​​2 milyan oo booqdayaal ah oo ka kala yimid in ka badan 120 ummadood oo kala duwan. Dad badan oo soo booqda, Moco waa barta laga soo galo adduunka fanka. Waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno dhagaystayaal aad u ballaaran oo na soo booqda oo markii ugu horreysay aad u jeclaada fanka.
Moco Barcelona wuxuu leeyahay farshaxanno Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Banksy, Salvador Dalí, Damien Hirst, Keith Haring, KAWS, Hayden Kays, Yayoi Kusama, David LaChapelle, Takashi Murakami, & Inbadan! Farshaxanka qibrada leh ee dhijitaalka ah ee kooxdaLab, Les Fantômes, iyo Studio Irma.
Bandhigyada Gaarka ah:
Esplendor de la Noche by Guillermo Lorca: Moco wuxuu soo bandhigayaa bandhiggii ugu horreeyay ee Yurub ee farshaxan -yahankii reer Chile ee casriga ahaa oo muujinaya isku -darka sixirka iyo waaqica. Waxaa soo saaray Simon de Pury, xaraashle halyeey ah, ganacsade farshaxan iyo mid ka mid ah shaqsiyaadka ugu horreeya adduunka fanka.
KooxdaLab: Farshaxanka Dijital ah ee Dijital ah
Goobtii ugu horraysay ee Yurub ee loogu talagalay dhacdada NFT.
Matxafka Moco Barcelona
Waxay ku taal c / Montcada 25 ee Barcelona. Matxafka Moco wuxuu la wareegayaa booskii Palacio Cervelló, oo hore u ahaa degenaanshaha gaarka ah ee qoyska sharafta leh ee Cervelló ilaa Qarnigii 18aad. Laga soo bilaabo qarniyadii dhexe ilaa 20aadth Qarnigii, aristocrats -kii, baayacmushtariyadii, iyo qoyska boqortooyada ayaa qabsaday goobtan taariikhiga ah. Ixtiraamka ugu sarreeya ee dhismaha jira, Studio Pulsen wuxuu soo ceshaday nuxurka asalka ah ee Palacio Cervelló - isagoo la jaan qaadaya baahiyaha Matxafka Moco si loo abuuro meel weyn oo casri ah oo casri ah.
La wareegidda meelahani waxay ka tarjumaysaa dadaalkii ugu horreeyay ee Moco, markii ay la wareegtay Villa Villas (b. 1904) ee Amsterdam - dhisme taariikh ahaan loo qoondeeyay dadka mudnaanta leh. Mar labaad, Matxafka Moco wuxuu beddelaa tamarta meel gaar ah si loo soo dhaweeyo dhammaan. Si kastaba ha ahaatee, Amsterdam waxay noqotay mid aad u yar si ay u muujiso dhammaan riyooyinkeenna duurjoogta ah, booskeenna bandhiggu wuu kooban yahay. Waxaa jira farshaxan aad u badan oo aan rabno in aan wadaagno iyo sheekooyin badan oo kale oo aan sheegno.